Ogaden News Agency (ONA) – Xidhidhiyaha Jaliyadaha Ogadenya ee wadankani Maraykanka Mudane Xassan Tukri oo so Gadhay Minnesota
Xidhidhiyaha Jaliyadaha Ogadenya ee wadankani Maraykanka Mudane Xassan Tukri oo so Gadhay Minnesota
Posted by ONA Admin	/ August 21, 2015
Ayadoo ay Jaliyadaha Ogadneya ee gobolka Minnesota ay si xowli ah isugu diyarinayso qabanqabada iyo ababulka sanadguradii 31 ee ka soo waregatay asaskii JWXO/ ONLF ayaa waxaa si aad ah ugu soo qulqulaya gobolka Minnesota ergada kaqayb galaysa munasabad xuska sanadgurada JWXO. Ergadan ayaa kakala timid gobolda kale ee wadanka maraykanka iyo dunida dacaladeeda intaba.
Waxaa Saacado yar kahor gagida diyaradaha ee St.paul/Minneapoilis International airport soo cagadhigatay diyaradi uu lasocday Mudane Hassan Tukri oo ah xubin katirsan golaha dhexe ee JWXO islamar ahantana ah xidhidhiyaha Jaliyadaha Ogadenya ee wadanka Maraykank.
Masulkan ayaa waxaa garonka diyaradaha si hersara ah ugu so dhaweyay Xubno katirsan Jaliyada Ogadenya iyo ururka OYSU Minnesota oo uu horkacayo gudomiyaha Jaliyada Ogadenya ee gobolka Minnesota Mudane Abdifatax Xasan.
Dhanka kale marka ad dhexmarto suqaqa somalidu isugu yimadan ee kuyala goblka Minnesoya ayaa waxaad arkaysaa ama dhagtada kuso dhacaya dadka oo hadal haya munasabada sanadgurada JWXO ee lagu qabanayo Minnesota malinta Sabtida aah 22 August 2015 ee fooda inugu soo haysa.
Munasanadan ayay dadku aad uga shintirinayeen intii muda ahba. Hadu Ebe ogolado, waxanu dib idinka soo tabindona sida ay munasabadani kubilabato iyo sida ay kudhamato.